Iyo webhusaiti nyowani yeWally michina tekinoroji yakatangwa
Iyo webhusaiti yeDongguan Walley Machinery Technology Co, Ltd. yakatangwa zviri pamutemo. Ndatenda nekutarisisa kwako kukura kweWally. Kuti ushumire zvirinani iwe, Wally webhusaiti yakagadziridzwa uye kukwidziridzwa, uye nhau yenhau centre yewebhu inozoshandiswa kugadzirisa Walley & ...
Volley mechanical technology servo chokurukisa R & D budiriro
Iyo yakareba yakamirirwa chaiyo yekuyedza nzvimbo yekupedzisira yakazogadzwa. Kugadzwa kwenzvimbo yekuyedza chaiyo kwakapa rutsigiro rwakasimba rwekuyedza kudhipatimendi remhando yebazi rezvigadzirwa. Mune iyo CNC chaiyo machining indasitiri, kunyatso kuyedza chinhu chakakosha ...
Wolley chaiyo yekuyedza nzvimbo yemuchina tekinoroji yakavambwa
Wally michina tekinoroji yakabudirira kupfuura TS16949 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu
Isu tinopemberera zvine hushamwari kuti Waley michina tekinoroji yapfuura iso / ts16949 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu. Lso / ts 16949 ndeye ISO9001, QS 9000 (US), avsq (chiItaly), eaqf (chiFrench), uye VDA6.1 (chiGerman) ndiyo yakajairwa mhando sisitimu yemotokari indasitiri. Muchidimbu, iyo qua ...
Wally michina tekinoroji yakabudirira kupfuura iyo ISO9001 yemhando yepamusoro manejimendi sisitimu
Musi waAugust 26, 2009, Dongguan Waley michini tekinoroji yakatangisa mukubvumidzwa kwe ISO9001 mhando sisitimu. Zvakatora gore rimwe kubva mukushanda kwe ISO9001 manejimendi sisitimu kusvika pakupedzwa kwechitupa. Mushure mekutanga kwe ISO9001 yemhando yepamusoro, ese madhipatimendi akanyora iyo ...
Wally michina tekinoroji zuva reGore Idzva mhuri inoungana kupemberera gore idzva
Musi waZvita 31, 2019, Wally michina tekinoroji yakaunza mukati megore reLunar Nyowani, uye mutambo wegore regore idzva wakasvika sezvakarongwa. Dhipatimendi revatungamiriri rakaronga nekuronga mabiko emabiko ezuva regore idzva reZuva. Mhuri yese yaWally yakaungana pamwechete kuti ...